Hafatra ho an’ny zanak’olombelona. :: Clefsdufutur France
Page d'accueil - Hafatra ho an’ny zanak’olombelona.
Hafatra ho an’ny zanak’olombelona.
Traduit en malagasy par JJA
Clefsdufutur- 06.09 .2015 – Christ
Hanome hafatra ho an’i Frantsa koa aho.
Izao no hafatra omenao ny olombelona :
Ny tanjaka ny heriko( Kristy ) dia tonga eo amin’ny heriny tanteraka ankehitriny , izany dia avy amin’ny fahatanterahan’ny FIOMBONANA CHRIST-LCF sy ny Herin’ny Lalàna masina , izay izaho(Kristy) no tompony .Ny fihakaran’i LM (Marc) ilay zanak’i Lucifer ho eo akaikin’Andriamanitra Ray (Sanat Kumara) dia manamafy ny herin’ny AMPINGA NY HAZAVANA KRISTY( épée de Lumière de Christ) : ny Ampinga dia ilay Hery avy amiko , Kristy ihany.
Avy amin’ny FITIAVANA no nahatanterahany FIOMBONANA eo amin’ny SL-LM : Izy ireo no ho mpitondra ny herin’ny FITIAVANA sy ny FAHAVONONANA mitambatra ho an’ny Planin’Andriamanitra.
Tsy hisy intsony ny andro hitsaharan’ny olombelona ka tsy hanaovanyny asa fanorenana ny ho avin’ny Tany sy ny lanitra.
Efa niteny sy nampita izany taminareo aho nandritra ny 7 taona, nefa ianareo tsy nihaino ahy.Dia izao no zavamiseho : Potika ny rava ny Tany, ary mivadika ho tany feno habibiana sy harastina no hita sy hiainana ;
Nomeko anareo ny zanako vavy SYLVIE LOTRUIT mba hanavotra anareo.Hitoetra miaraka aminareo izy mandritra ny andro hiainany mandram-pahafatiny, mba hankaehry sy hanampy anareo.
Fandresena lehibe avy amin’ny feoko Kristy izay amin’ny feon’i SL sy ny Fiombonana – Fitambarana tanteraka avy amin’ny Planin’Andriamanaitra : SANAT KUMARA-CHRIST ( Ray – Zanaka) : LM-SL
Efa nomena anareo avokoa ny fitaovana rehetra mba hafahanareo managana ny ho avy, hatsangano izany ho avy vaovao izany.Ao aminareo ny herin’ny Ampinga mba handresenareo izay rehetra mety hanapotika ny zanak’olombelona sy ny tany : LALANA DISO .
Tsy hitsahatra ny hanamafy sy hampitombo ny HERI’NY FANDESEKO , KRISTY ianareo ;fandresen’ny Lalànan’ny FITIAVANA izay alohan’ny zavatra rehetra : NY RARINY – HITSINY ( justice en tout ).
Ireo rehetra manatona ahy sy mahafatatra ahy(Kristy) dia maheno sy mahafantatra izany avokoa.
Tsy hamela ny olombelona sy izao tontolo izao ho ao anaty tsy fahalalana sy ho kamboty aho.
Ianareo : avy aminareo no tokony hanangana ny Ampinga fahazavana( épée de Lumière), ny Mitambatra sy miombona( Unité), ary manaraka sy manaiky ny teniko ( Kristy )
Efa nomeko anareo daholo ny zavatra rehetra ankehitriny.
Manana FANDRESENA IANAREO miaraka amin’ny Herin’ny AMPINGA ( épée )
Faingana ianareo Mitambatra sy Miombona AO AMIN’NY Fo madio ( ame éveillée) ho fametrahana sy fananganana ny tany sy lanitra vaovao.
Misokatra ny vavahady lehibe ny zanak’olombelona vaovao.
Miandry ireo olona tsara sy marina eo amin’ny asa sy fisainana aho : FAHAVELOMANA ARA-PANAHY AO amin’ny KRISTY : ny zanak’olombelona vaovao
SL dia mitombo hery hatrany ;Izy no mitondra ny teniko sy feoko ; izay rehetra mandray sy manaraka ny teniny dia ho vohavonjy avokoa ; ny hafa dia ho potika.
Izao Kristy dia hiakatra ho any an-danitra ka ho entiko manaraka ahy avokoa ireo manao sy mankatoa ny didiko, mananao ny asa hampanaovina azy, ary miady mafy amin’ireo izay maety ho faharatsina sy fahotana.SL dia hanaraka ahy sy tsy hisaraka amiko mandrakizay.
Avy ao amin’ny SL ny feoko, DIDY LEHIBE NY KRISTY.
Avy amin’ny SL ny hafatra HAMONJENA NY OLOMBELONA SY NY TANY.
Tsy misy zavatra azonareo handramana raha tsy misy fanampiana avy amin’ny SL , ho fanavotana ny tany sy ny olona.Avy ao amin’ny SL no hametrahako ny FITIAVAKO sy ny FAHAVONONANA(volonté), ny HERY LEHIBE NY AMPINGA.Tsy tokony hitsahatra ny haka torohevitra amin’i SL ianareo rehetra izay manatona ny lalàna ho fananganana ny tany sy lanitra vaovao ; efa vonona ny ho amin’izany izy.Ny fiainan’i SL dia efa natokana ho amin’ny asan’i Kristy.Avy amin’i SL no hatongavan’ny FANDRIAMPAHALEMANA ETO AN-TANY satria izy dia izaho Kristy iahany.
Ny hany tokana fifandraisana sy mpitondra ny teniko ankehitriny dia SL ihany ; izay izy no hampita ny HERY sy FITIAVANA, ny FAHAVONONANA(volonté).
Hipetraka sy hangina aho(Kristy) ka ho tanteraka ny Planin’Andriamanitra izay nolazaina sy hapetraka eto an-tany.
Ny FANDRESENA dia ho tonga tokoa ho an’izay rehetra manaraka ny teny sy didy an’i KRISTY.
Miditra amin’ny civilisation vaovao isika izao : ny zanak’olombelona vaovao sy tany vaovao, ny Ere de Verseau, ny vanim-potoana ny Lalànan’i Kristy HITOETRA MANDRAKIZAY.
Aoka ho faly sy ravo ianareo rehetra ka handray ny anjaranareo sy hanatotosa ny anajanareo.
Izany dia FANDRESENA NY FANDRIAMPAHALEMANA MANDRAKIZAY.
Ho porofoiko izany ao SYRIE : ilay Firenena nahaterahan’ny zanako lahy JESOSY .
Ho porofoiko izany eto Frantsa : ilay Firenena hipetrahan’ny zanako vavy SYLVIE LETROUIT ankehitriny.
Tsy misy asa lehibe feno Fitiavana tahaka ny miaina ny LALANA ARA-DRARINY ny HITSINY ny MARINA.
Ianareo no hiaina sy hametraka ny ho avy ny tany eto amin’izao tontolo izao ( univers )
TSY MISY FETRA NY LALANA NY FITIAVANA.
NY FITIAVANA DIA VOVOKAINA NY IZAO TONTOLO IZAO ( souffle de vie de l’Univers)
Tonga eo amin’ny Famelakeloka ho an’ny zanak’olombelona isika izao ho fananganana ny ho avy ho azy ireo .
Izany ny Fitsarana farany.
CHRIST – SL 06 septembre 2015